Asongadin’ny Tetikasa Zazavavindrano ny olan’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy 10 isan'andro no maty novonoina ao Meksika
Voadika ny 29 Avrily 2021 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, عربي, polski, русский, Français, Ελληνικά, Español
Tsy ao, Tetikasa zazavavindrano, seho nahazoana alalana.
Vehivavy folo isan'andro no maty nisy namono ao Meksika. Manameloka ity herisetra ity ny fikambanana sy mpanakanto feminista, izay mpitranga ao an-trano sy eny an-dalambe, sy ny tsy fisian'ny setriny politika amin'izany. Avy amin'ny asany Tetikasa Zazavavindrano, ny sary nopihan'i Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes dia te-hanome jery am-panoharana amin'ny famonoana olona hamoha ireo Meksikana sasany noho ny fahanginan'izy ireo tsapa tao anatin'ny famoahan-gazety, indrisy fa miverimberina amin'ny faharatsiany izy ireo.
Nisafidy ny fanoharana amin'ny zazavavindrano i Álvarez Reyes tamin'ny andian'ny saripika satria “nanana fanehoana ara-nofo nandritra ny ankamaroan'ny tantaran'ny zavakanto” ity zavamananaina angano ity, araka ny nambarany tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny mailaka. “Misy ifandraisany amin'ny fakam-panahy ara-nofo izy io, izay tsy maintsy halavirin'ny lehilahy mba hanohizany ny diany, ka raha lazaina izany, dia hita fa mifandraika indrindra amin'ny lehilahy izy ireo, raha tsy heverina ny fitondran-tenany na ny fakam-panahy mianjady aminy.”
Amin'ity solontenan'ny ara-nofo ity dia te hanome heviny an'ohatra vaovao izy. Amin'ity andiany ity, “lasibatry ny rafitra mivarotra, mividy, maniboka ary mamono azy ireo, amin'ny fiheverana azy ireo ho ambany, miankina amin'ny sitrapon'ny hafa.”
Hena zazavavindrano 1, Tetikasa zazavavindrano, seho nahazoana alalana.
Ary na dia natao ho an'ny mpihaino isankarazany aza ny Tetikasa Zazavavindrano, dia nanampy i Álvarez Reyes fa “liana amin'ny famoronana fifanakalozan-kevitra amin'ny lehilahy izy, satria zava-dehibe ny andraisan'ny lehilahy anjara andraikitra mavitrika amin'ny ady amin'ny rafitra mampaharitra herisetra mihatra amin'ny vehivavy.”
Ny sarin'i Álvarez Reyes, telo ambin'ny folo totaliny, dia ahitana vehivavy-trondro amina toe-javatra maro manaisotra maha-olombelona azy. Betsaka no mety ho sarotra ny mijery azy, satria manasongadina ny mamparefo ny vehivavy ary, araka ny fahitan'ny mpanakanto, ny fomba fahitana azy ireo ao amin'ny fiarahamonina meksikana – ho hena.
Manana ny mampiavaka azy amin'ny fampisehoana ireo maodely mitanjaka-tapany ireo sary, izay mampanontany tena ny antony anehoana ny vehivavy amin'ity endrika ity, satria misy mahita izany ho fomba fijerin-dehilahy an'ilay lohahevitra. Namaly i Álvarez Reyes fa te-hatoky amin'ny sarin-jazavavindrano, tapany trondro, tapany olombelona izy mba hialana amin'ny fifandraisana amin'ireo sary an-tantara an-tsoratra amin'ny kolontsaina pop, ary hanehoana fa tena vehivavy feno ireo olona iharan'ny herisetra.
Zazavavindrano Charal, Tetikasa zazavavindrano, seho nahazoana alalana.
Mikasika ny fanontaniana ny amin'ny antony nametrahany ny zazavavindrano amin'ny endrika manaitaitra ara-nofo, marefo na misosin-drà, dia mamaly i Álvarez Reyes fa mampiasa ny fanaitairana izy “mba hanasongadinana fa maro ny fihetsika mahery setra mifototra amin'ny firaisana ara-nofo.” Amin'ny alàlan'ny fampisehoana toe-javatra mahery setra ao anaty sary, nokendrena izany hanasongadinana ny tsy firaharahan'ny fiarahamonina.
Ohatra, ao amin'ny sary Anatomy Class, “nojerena toy ny sahona tao amin'ny laboratoara an-tsekoly ilay zazavavindrano maty, tsy liana hiresaka aminy ao amin'ny fiainana, mba hiatrika sy hanaiky ny maha-olo-tokana azy. Ao anatin'ireo maro azo sainina, dia fitsikerana ny rafi-pitsarana sy ny gazety ho antontanisa na tarehimarika ny vehivavy matin'ny famonoana vehivavy, manome ‘vahaolana’ tsy mamokatra amin'ny olan'ny herisetra izay mody tsy mahazo ny antony sy ny niaviany.”
Ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia tsy maodely, fa vehivavy avy amin'ny toerana, taona, ary asa samy hafa izay mampiombom-po amin'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy.
Amboara, Tetikasa Zazavavindrano, seho nahazoana alalana.
Amin'izao fotoana izao dia tsy aseho any amin'ny fanaovana fampirantiana ny asa noho ny firindrinana COVID-19. Saika hitety ireo sekoly ambaratonga faharoa sy ny lisea ny heviny voalohany, saingy izao dia mieritreritra izy ny hampiaraka azy anaty boky ny sary telo ambin'ny folo sy ny zava-nitranga tao ambadiky ny sehatra, mba hampisehoana ny fomba namolavolana ilay tetikasa, miaraka amin'ny fampahalalana azo antoka momba ny famonoana vehivavy sy ny herisetra.
Ny zavatra tian'ny mpaka sary indrindra amin'ity asa ity dia azo fintinina amin'ny teny iray: fifampiresahana. Te handrisika ny “fifanakalozan-kevitra mampihataka antsika amin'ny tsy firaharahana” sy “rehefa mahita ny sary ny olona dia te-hiditra resaka eo anoloan'ny sangan'asa.”
“Tianay ny hampihetsi-po ny mpijery mba hieritreretan'izy ireo ny antony sy ny niandohan'ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, ary ny fizotran'ny fanao manimba isan-karazany mitondra mankany amin'ny famonoana vehivavy any amin'ny farany indrindra,” hoy izy.